३ दिन पछि हुन् लागेको बिवाह अगाडीनै सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि एक्लिएर प्रेमीले भने, ‘तिम्रो लागि रातो साडी किनेर ल्याइदिएको छु बुडी, तिमि कहाँ गयौ’ ? «
३ दिन पछि हुन् लागेको बिवाह अगाडीनै सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि एक्लिएर प्रेमीले भने, ‘तिम्रो लागि रातो साडी किनेर ल्याइदिएको छु बुडी, तिमि कहाँ गयौ’ ?
Published : 24 January, 2020 5:03 pm
काठमाडौं – बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका १ गुरुखोला घर भएकी रमिता पाँच दिन पछि हुने आफ्नो विवाहको तयारीमा आफै लागेकी थिइन् । डेढ वर्ष अघि आफ्ना प्रेमीसंगै बस्दै आएकी रमितालाई माइतीले उनको विवाह स्वीकार गरेका थिएनन् । तर अहिले माइतीलाई पनि मनाएर धुमधामका साथ माघ १३ गते विवाह गर्ने निधो भएको थियो ।
यो पनि : आफ्नै बिहेको निम्तो साथीलाई बाँडेर फर्किदै गर्दा रमितको सडक दुर्घटनामा परि निधन !
दिनपछि उनको विवाह हुँदै थियो। घरमा सामान जुटाउने र निम्तो बाँड्ने चटारो थियो। आफ्नो बिहेको निम्तो साथीहरुलाई दिन रमिता भट्ट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको जनज्योति टोल गएकी थिइन्। रमिताले साथीहरुलाई निम्तो बाँडिन्, तर विवाह हुन पाएन।निम्तो बाँडेर महेन्द्रनगर बजारतर्फ फर्किरहेकी उनको बिहीबार साँझ टिपरको ठक्करबाट निधन भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कञ्चनपुरबाट भवानी भट्टले लेखेकी छन्।